Juventus oo dharbaaxo xoogan la damacsan kooxaha Arsenal, Tottenham Hotspur iyo AC Milan – Gool FM
(Italy) 20 Juunyo 2019. Juventus uu hogaaminayo macalinkooda cusub ee Maurizio Sarri ayaa waxay dharbaaxo xoogan la damacsan yihiin kooxaha AC Milan, Tottenham Hotspur iyo Arsenal, maadaama ay si xoogan ugu dhowyihiin dhameystirka heshiiska Joachim Andersen inta lagu gudi jiro suuqan xagaaga.
Wargeyska “La Gazzetta dello Sport” ee dalka Talyaaniga ayaa xaqiijiyay in maamulka kooxda Juventus ay si weyn u doonayaan inay iska xoojiyaan qeybta dambe ee difaaca dhexe, waxayna doonayaan inay sameeyaan saxiixa Joachim Andersen oo 23 sanno jir ah.
23 jirkan reer Denmark ayaa wuxuu sidoo kale bar-tilmaameed weyn u yahay kooxo ay ka mid yihiin AC Milan, Tottenham Hotspur iyo Arsenal.
Inkastoo Juventus ay sameysay saxiixa da’ayarka reer Turkey ee Merih Demiral, hadana kooxda ayaa dooneysa inay sii xoojiso qeybta dambe ee difaaceeda, si ay ugu diyaar garowdo xilli ciyaareedka cusub, waxaana ka go’an inay kala soo saxiixdaan Joachim Andersen naadiga Sampdoria xagaagan.
Joachim Andersen ayaa u saftay 32 kulan kooxdiis Sampdoria xili ciyaareedkan, waxaana loo arkaa mid ka mid ah daafacyada ugu fiican sannadkaan.
Kooxda Arsenal oo xiddig muhiim ah ka doonaysa Real Madrid